Muta Geology: Ihe edeturu, ihe omuma na nkowa zuru ezu | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime ụdị a, anyị ga-ekwu maka isiokwu dị iche iche gbasara geology nke uwa uwa. Anyị ga-amụ usoro mbara ala dị iche iche na-eme ma na ime ala nke ụwa na n'èzí. Elu ala ka ihe nile dị iche iche nke anyị ga-amụ gbasara ya. Tụkwasị na nke a, ị ga-enwe ike ịmata ụdị nkume dị adị, otu esi akpụ ya na nhazi zuru oke.
O doro anya na ị rapaara na ihe ndetu gị site na ụlọ akwụkwọ / mahadum ma ịchọrọ obere ihe iji dokwuo anya obi abụọ ị nwere. N’isiokwu anyị na-ebipụta, anyị na-anwa ịkọwa ihe n’ụzọ kachasị mma na n’ụzọ doro anya, dị mfe ma na-atọ ụtọ. Nke a bụ otu esi amata ihe mmụta dị mma karịa ma ị nwere ike ịmụtakwu banyere mbara ala anyị na geology.
Geology Ọ bụ sayensị nke na-ahụ maka ịmụ ọ bụghị naanị mmalite, kamakwa mmalite nke ụwa, usoro ya na mpụga ya na usoro niile a na-arụ.. Ọ bụ sayensị na-atọ ụtọ ebe ọ bụ na ị nwere ike ịmara nke ọma ụwa ibi na ya na otu esi hibe ya. I nwekwara ike ịmụ banyere ihe ndị ị na-agaghị eji anya gị hụ, dịka usoro dum nke ụwa na nhazi ya.
N’ime edemede niile dị na otu a, ị ga-abanye na akaụntụ oge niile geological oge. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịnwe echiche ka mma banyere oge gafere maka ụwa anyị iji mee ihe ma e jiri ya tụnyere ogo ndụ mmadụ.
Enwere m olileanya na ị nwere ike ịnụ ụtọ nke ọ bụla n'ime isiokwu anyị na-ebipụta na ngalaba a yana na anyị nwere ike inyere gị aka karịa ka o kwere mee ka nkà mmụta ala ụwa bụ sayensị na-atọ ụtọ.
otú e si kpụọ oké osimiri
por Portillo nke German eme Ụbọchị 5 .
Kemgbe ụwa, ndị mmadụ na-eche otú e si emepụta oké osimiri. Na mmalite narị afọ nke XNUMX, a kwenyere na…
Gịnị bụ achipelago
N'ụwa anyị, e nwere ụdị ọdịdị ala dị iche iche nwere àgwà pụrụ iche dabere na mmalite ha, ọdịdị ọdịdị, ụdị ala, wdg ...
gini bu lava
Volcanoes bụ ụfọdụ n'ime usoro mbara ala kachasị mma, ọ bụ ezie na mgbawa ha nwere ike itinye oge ụfọdụ…
Nkume Metamorphic bụ otu okwute nke emere site na ọnụnọ nke ihe ndị ọzọ dị n'ime…
Popocatepetl ugwu mgbawa
N'ihi mmalite ya na Nahuatl, aha ya pụtara "ugwu na-ese anwụrụ", n'ihi ịdị elu ya, ọ bụ ọnụ ọgụgụ kasị elu na Mexico mgbe…
Chicxulub crater bụ ihe mmetụta dị n'akụkụ obodo Chicxulub na peninsula nke…
gini bu ugwu
N'okwute bụ akụkụ ala nke na-ewere ọnọdụ nke mkpọda ugwu. N'echiche a, ọ nwere ike ịpụta na…
Kedu ihe onye ọkà mmụta ala na-eme?
N'ime sayensị ndị na-amụ mbara ala anyị bụ geoloji. Onye na-amụ ma na-emega ahụ na geology...
Mgbe anyị lere anya n'ihe ndị dị na tebụl oge, ọtụtụ n'ime ha na-anọgide na-akpọkwa ụwa dị ụkọ. Ọ dị na…
Ugwu nke Giants
Ugwu Los Gigantes bụ ugwu mgbawa ugwu dị n'ebe ọdịda anyanwụ Tenerife, Canary Islands, Spain. Saịtị ahụ nwere…
Ugwu Saint Helena
Ugwu Saint Helens bụ ugwu mgbawa na-arụ ọrụ na North America, na-ebili nke ọma na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke…